ExactTarget သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကို (လူမှုရေး) မှတ်တိုင်တစ်ခုသို့ယူသည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီမနက်မှာငါရှေးရှေးကနေအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည် အတိအကျ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေါ်တယ်ကိစ္စတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုထည့်သွင်းရန်အဆင့်မြှင့်ခဲ့ဖော်ပြထားသည်။ ဤသည်မှာသေးငယ်သည့်ဖောက်သည်ပေါ်တယ်မဟုတ်ပါ။ ExactTarget 3sixty သည်အပြည့်အဝလည်ပတ်သောဖောက်သည်ဗဟိုပြုလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် အမှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များတစ်ဦး လေ့ကျင့်ခန်းစာကြည့်တိုက် နှင့် ဖိုရမ်များ ဖောက်သည်များအချင်းချင်းကူညီရန်။
ငါထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်မှ အတိအကျ ဒီနေ့မင်းတို့သူတို့လေထဲမှာလွင့်မျောနေတယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်တယ်။ Jeff Rohrs, Mitch Frazier နှင့် Stephanie Zircher တို့ကကျွန်ုပ်အားအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်အားသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးပို့ခဲ့သည်။ Congrats က Stephanie ကိုသွားတာပါ။ ငါသူမနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကသူမအံ့သြသွားတယ်၊ သူမအဖွဲ့နဲ့အတူဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုထိုက်တယ်။
ယခု 3sixty တွင်အဖွဲ့ဝင် ၁၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်
ထုတ်ကုန်အတွက်သုံးစွဲသူအကြံပြုသည့်အကြံဥာဏ် ၁၀၀ နီးပါးသည် 100sixty အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များမှတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ထောက်ခံမှု 24-7? Client Success မှ BackOffice + ဖုန်းအထောက်အပံ့မှတဆင့်အွန်လိုင်း
အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနေရာသည်အတော်လေးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန် ExactTarget ကိုအလွန်မျှော်လင့်နေသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိမည်သည့်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှမဆိုသင်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ ယခုအပတ်တိုင်း ၁ ခုပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ ExactTarget သည် ESPs များနှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီးစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးခေတ်မီခြင်းနှင့်အမြန်ဆုံးအပြင်ထွက်စာပို့စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ။
ExactTarget မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးရင်အဲဒါဟာအရည်အချင်းအရှိဆုံးနဲ့တစ်ခုပါ Indianapolis ရှိ ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီများ။ ငါကအဲဒီမှာအသင်းကိုအရမ်းလေးစားတယ်၊ ကုမ္ပဏီနဲ့ငါ့ရဲ့အချိန်ကိုပျော်မွေ့ခဲ့တယ်။
၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်သာပံ့ပိုးပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ငါမတိုင်မီရေးသားခဲ့သည် SaaS ၏သော့ချက် ၎င်းသည် platform တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အသုံးပြုသူများကို platform ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
? 3sixty သည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းများနှင့် လက်တွဲ၍ လက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (သို့) လျှောက်လွှာတွင်သူတို့ကြုံတွေ့နေရသည့်ပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမေးခွန်းများမေးရန်ရွေးချယ်သည့်နေရာဖြစ်လာသည်။ Stephanie Zircher ကသူငယ်ချင်းကောင်းနှင့် 3sixty ၏ ExactTarget ၏ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ BackOffice ကို 3sixty သို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသောလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုသီးသန့်ဖောက်သည်များသာပညာရေး၊ ပံ့ပိုးမှုတောင်းဆိုမှုများနှင့်အွန်လိုင်းပူးပေါင်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အပြင်စိတ်ကူးကောင်းသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မှလွဲ၍ ထုတ်ကုန်၏အသုံးဝင်မှုကိုအသုံးချခြင်းသည်ထူးခြားသည်။ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုစီသည်၎င်းင်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘောင်အတွင်းတွင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာလှပတဲ့ application တစ်ခုပါ။
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရ, ကြီးမားတဲ့အီးမေးလ်အမြောက်အများနှင့်အတူကုမ္ပဏီကြီးများစျေးကွက်အပေါ်ပိုကောင်းတဲ့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရှာမတွေ့ပါ။ အဲဒီမှာအကြီးအပြိုင်ဘက်အချို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် ExactTarget ဇာတိမြို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ExactTarget ၏ BackOffice တွင်သတင်းဖြန့်ချိမှုတစ်ခုလုံးကိုသေချာဖတ်ပါ။
Tags: ဣဇာက်သည်လော်ရာသုတေသန pew
10:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 52
မင်းမှန်ပါတယ် ။ စျေးကွက်တွင်ပြိုင်ဘက်များရှိနေသော်လည်း ExactTarget> အခြားသူများရှိသည်
11:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 13
Great post ။ ငါ awebber ကိုလအနည်းငယ်သုံးပြီးငါလည်ပတ်နေတဲ့ site တစ်ခုမှာအဲဒါနဲ့အတူအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်။ parser ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်လအနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ developer နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ၄ င်းတို့၏ developer များကပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သူတို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။
13:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 37
ExactTarget နှင့် ပတ်သတ်၍ ကြင်နာသောစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါတို့တွေအားလုံးအဲဒီမှာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Stephanie ဟာသေချာတာတစ်ခုကတော့ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တစ်ယောက်ပါ။ (ဂီတတွင်အလွန်အရသာရှိသည်)
၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့သည် SaaS ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောကဏ္ aspects တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏ဆော့ဝဲလ်ကိုမစ်ရှင်အတွက်အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမစွန့်ခွာနိုင်ပါ။ Scott McCorkle ပြောသလိုဒီဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်။
13:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 29
အလောင်းအစား, ခရစ်! နင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုတန်ဖိုးမထားလောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်လုံးဝမှန်ကန်သည်ဟုသင်ထင်သည်။ ပြီးတော့ Scott McCorkle ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာကသူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ExactTarget ကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဟိုမှာဂရိတ်ရှေးရှေး!